“Cyber Poachers”: Boojiska laaya duur-joogta la ilaaliyo ee dabargo’a ku dhow – Kasmo Newspaper
“Cyber Poachers”: Boojiska laaya duur-joogta la ilaaliyo ee dabargo’a ku dhow
Updated - March 5, 2017 12:38 pm GMT
Halis badan ayaa soo wajahaysa duurjoogta caalamka oo idil, kuwa dabinka u dhigta ee qabta iyo kuwa sida arxan darrada ah u laaya xoolahaas, dhammaantood boojisku waa dambiilayaal.
Kuwooda sharci-darrada ku ugaarsada ee hadda soo baxay waxaa ka mid ah qaybo cusub oo la magac baxay “Cyber-poachers” oo dhexda ka jabsada e-maillada qalabka GPS ee noocyada dabargo’aya lagu badbaadiyo.
Teknolojiyada casriga ah ayaa wax badan soo badbaadisay noocyada duurjoogtaas ee dabargo’a ku sii dhowaatay, laakiin markii ay gacanta khaldan gashay, Farsamadaas waxay la timid halis badan.
Qalabkaas waxaa isticmaala ilaalada daaqa “Forest Rangers” iyo aqoonyahannada daraasadeeya dhaqanka naflayda, si ay ula socdaan duur-joogta iyo deegaanka ay ku nooshahay.
Boojisku waxay kiraystaan dadka sirta jabsada “Hackers” si ay u galaan e-maillada ay ku soo dhacaan farriimaha qalabka GPS-ku soo dirayo, marka ay xogtaas helaanna, si sahal ah ayay ula socdaan, dhaqdhaqaaqa duur-joogta, iyaga oo isticmaalaya “Antenna” caadi ah.
Qaylodhaanta arxan-darrada “Cyber-Poachers”ku waxay ka soo yeereysaa meelo badan Dunida, sida Ururrada Koofur Afrika ee Wiyisha badbaadiya, taas oo u dhimata qiimaha lagu iibiyo geeskeeda.
Dalal kale oo Afrika ahna qayladu waxayu ka soo yeeraysaa ugaaratada Maroodiga, waayo koofur-bari Asia Faanta Maroodigu waxay 1Kg lagu iibiyaa $1,000 Dollar.
Xitaa aqoon-yahannada “Biology”-ga Jaamacadda Carleton ee Ottawa ayaa ka cabanaya habkaan casriga ah ee loo ugaarsado yayda Canada, taas oo soo gaabisay saacadihii faraha badnaa ee duurka laga raadin jiray.
Jaamacaddaas Gobolka Ontario waxaa kale oo ka soo baxaysa calaamad kale oo la xiriirta, qaar ka mid ah shaqaalaha Dalxiiska oo u isticxmaala qalabkaas si ay uga helaan kaynta dhexdeeda duurjoog ay dalxiisayaasha tusaan.